Ihe ngosi nke Samsung Galaxy S8 ọ ga-egbu oge ruo na ngwụsị nke March? | Akụkọ akụrụngwa
New asịrị banyere ihe ga-abụ Samsung flagship n'oge mbụ nkebi nke 2017 na-egosi na South Korea ọnụ ga-amali elu na Samsung akwabeghị de Barcelona na February n'ime usoro nke Mobile World Congress 2017, iji gosipụta na njedebe nke March na ihe omume pụrụ iche maka ika ahụ. N'ezie, akụkọ a emeela ka anyị nwee mgbagwoju anya na mbụ, ebe ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, ọ ga-egbu oge ruo Eprel ma ọ bụ enwere ike ịre ahịa nke ngwaọrụ ahụ ma anyị enweghị mmasị na nke a.
Igbu oge nwere ike ịbụ maka nchekwa
Mgbe ihe mere na Samsung Galaxy Note 7, ụlọ ọrụ ahụ enweghị ike ikwe ka onye ọzọ tụgharịa na nke a ebe ọ ga-apụta ọkpụkpọ ọzọ dị mkpa n'okwu akụ na ụba yana ọkachasị na mbiet. Ọ bụ ya mere a ga-eji tụlee akụrụngwa nke wetalarị akara ika n'elu ikiri ụkwụ na ọ ga-abụrịrị na otu ihe ahụ anaghị eme ọzọ, yabụ ngosi nke Samsung Galaxy S8 ga-eme na ngwụcha ọnwa Machị iji chọpụta na ihe niile zuru oke.
Anyị ekwuola na nke a ga-egbu oge ịmalite ahịa nke ọnụ ahịa ya ma ọ dịghị mma maka ika ahụ chọrọ ịtụgharị peeji ahụ na isiokwu Note 7 ma gosipụta ama ọhụụ ọhụụ nke Galaxy S8. N'oge a niile anyị ahụbeghị ihe kpatara ihe kpatara ọkwa 7 nke ọkụ ji gbaa ọkụ, mana anyị kwenyere na akara ahụ amaworị ya ma mara otu esi edozi nsogbu a n'oge. Ọzọkwa Enweela oge zuru ezu ịrara na Galaxy S8 ma chee ya na MWC 2017 na-enweghị nsogbu.
Tupu anyị anọrọ na ozi ọma a, ọ ga-eme ka o doo anya ọ bụ asịrị nakwa na ọ nweghị ihe ekwenyela na akara a, ma oge nke oge ga-abụ isi ihe na-achọpụta ma ọ bụrụ na ndị South Korea ga-ekwe n'ezie ka ihe ngosi mgbasa ozi na-anọchite anya MWC na Barcelona gbapụ, iji mee ka ngosi ha emesịa na n'ezie, na-enwechaghị mmetụta na mgbasa ozi. Onwe m achọghị ikwenye na asịrị a maka ihe niile ọ gụnyere, yabụ ka anyị chere ka ị hụ nkọwa ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ihe ngosi nke Samsung Galaxy S8 ọ ga-egbu oge ruo na ngwụsị nke March?
Vidiyo 360 dị ndụ na-abịa na Facebook